Waraysi fanaanada Ruun Xadi Saban - BBC Somali - Aqoon Guud
Waraysi fanaanada Ruun Xadi Saban
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Abriil, 2013, 20:00 GMT 23:00 SGA
Waraysi fanaanada Ruun Xadi Saban oo marti ku hayd barnaamishka jimcaha ee BBC.
Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka.
Fanaanada Ruun xadi Saban waxay qaadaa heesaha dhaqanka iyo Hidaha ee Soomaalida. Wariyaha BBC Axmed Saciid Cige ayaa toddobaadkan ku waraystay magaalada Hargaysa oo ay uga warantay micnaha iyo alifaada heesaheeda dhaqanka.
Dhibaatada haysata dadka Soomaalida ee la takooro04:29
"Alshabaab bilo ayaan ku jabinaynaa"02:36